Izilumkiso zokufakela udonga lweVidiyo yeLCD
Ukufakela kunye nokugunyazisa amanyathelo e-LCD Video Wall, yintoni ekufuneka ihlawulwe ingqalelo kwi-LCD yokufakelwa kwodonga lwevidiyo? Namhlanje, uLayson uya kushwankathela imiba ethile efuna ingqalelo ngexesha lofakelo. I-LCD Video Wall yahlukile kwiiseti zeTV zasekhaya. Udonga lweVidiyo yeLCD lurhwebo ikakhulu, lunophawu...
Iimpawu ze-LCD Video Wall
Yintoni iWall yeVidiyo yeLCD, zeziphi iimpawu zodonga lwevidiyo ye-LCD, zeziphi izakhono zokufakela kunye neendlela ze-LCD yodonga lwevidiyo ye-LCD, makhe sijonge namhlanje! Udonga lwevidiyo ye-LCD ye-LCD ingasetyenziswa njengemonitha yodwa, okanye inokudityaniswa kwiscreen esikhulu kakhulu. Ngoku ka ...
Ubuchwephesha obuqhelekileyo bokuchukumisa kwikhiyoski yesikrini esichukumisayo
Ngokukhula okwandayo kwetekhnoloji yokuthintela, oomatshini bokuchukumisa basetyenziswe ngokubanzi kwimiboniso yentengiso, imfundo, ukuzonwabisa kunye nezinye iinkalo. Izixhobo ze-elektroniki zokunxibelelana nekhompyuter yomntu zii-intshi ezimbalwa kuphela, ishumi elinesibini lee-intshi zekhompyuter, kunye nescreen esikhulu njengamashumi...
Iimpawu zokukhanya okuphezulu komdlali wentengiso wangaphandle (uphawu lwedijithali)!
Wonke umntu kufuneka azi umdlali wentengiso wangaphandle (umqondiso wedijithali), oluluhlobo lomdlali wentengiso (umqondiso wedijithali) isixhobo esisetyenziselwa umboniso wangaphandle. Ke zithini iimpawu kunye nezilumkiso zokuqaqambisa umdlali wentengiso wangaphandle (uphawu lwedijithali)? Makhe sijonge kunye!...
Iingcebiso zesikrini esichukumisayo —- Isisombululo sokungakwazi ukubamba umatshini wokuchukumisa yonke into (kwikiosk yesikrini sokuchukumisa)
Kufuneka ndenze ntoni ukuba isikrini sokuchukumisa yonke into-nye-umatshini ayinakuchukunyiswa? Ekusetyenzisweni kwansuku zonke kwesikrini sokuchukumisa yonke into-nye kumatshini, akunakuphepheka ukuba isikrini sokuthintela asiphenduli, kwaye isikrini asikwazi ukucofa. Abasebenzisi abaninzi abazi ukuba bajongane njani nolu hlobo lwengxaki. Sombulula inqaku...
Ukugcinwa nokugcinwa kwezakhono zomdlali wentengiso yenethiwekhi (umdlali weAD)
Ngokuhambela phambili kancinane kophuhliso lwehlabathi jikelele, ubhengezo oluninzi kufuneka lusetyenziswe kumazwe ngamazwe. Indlela yemveli yokukhangisa ngokucacileyo ayifanelekanga umgangatho onjalo. Ke ngoko, umdlali wentengiso womnatha (umdlali weAD) uphumile ngenxa yokuba...
Uthini umahluko phakathi kwe-multimedia efundisa i-smart whiteboard kunye ne-smart whiteboard yenkomfa yenkomfa?
Ngokusetyenziswa ngokubanzi kwe-touch all-in-one smart boards, abasebenzisi abaninzi baphakamise umbuzo: Yintoni umahluko phakathi kwe-multimedia yokufundisa i-white-in-one smartboard kunye nenkomfa yequmrhu all-in-one smart board? Nangona zombini zibonakala ngathi zizikrini zesikrini esikhulu, uninzi ...
Indlela yokutshintsha umxholo womgangatho wokuma umdlali wentengiso? (Nemiyalelo yokusebenza.)
Indlela yokutshintsha umxholo womgangatho wokuma umdlali wentengiso? Abasebenzisi abaninzi abazi ukuba badlale njani umxholo wentengiso kwaye batshintshe umxholo emva kokuthenga umdlali wentengiso omileyo. Namhlanje, i-LAYSON iya kukuxelela indlela yokuyibuyisela kunye nemiyalelo yokusebenza ehambelanayo. 1. Yima-...
Yintoni umahluko phakathi komthamo, ukuxhathisa kunye ne-infrared ye-in-one-touch screen kiosk?
Uthini umahluko phakathi kwecapacitance touch screen, resistance touch screen kunye ne-infrared touch screen of all-in-one touch screen kiosk machine? Ikiosk yesikrini sokuchukumisa/Yonke kumatshini omnye yahlulwe ngokubanzi yaba yicapacitive touch screen all-in-one touch screen kiosk machine, resistance touch scre...
Isiphumo kunye nophuhliso olukhawulezayo lomdlali wentengiso weLCD (umdlali weAD)
Ngophuhliso olukhawulezayo lwe-Intanethi, isayikholoji yabantu yabathengi inobuqili kwaye inobunzima. Iindawo zoqhagamshelwano phakathi kwamashishini, iimveliso, iimveliso kunye nabathengi kufuneka nazo zibe ntathu-ntathu kunye ne-multi-dimensional. Nganye kwezi ngongoma zinokuchaphazela abathengi bokuthenga kwengqondo...
I-OLED iyingozi! I-Mini ye-LED iya kuba yeyona nto iphambili kwiMarike yeTV ekwisiphelo esiphezulu
Ngokutsho kweJW Insights, iJW Insights ikholelwa ukuba iiTV ezincinci ze-LED zinamandla amakhulu entengiso. Njengoko iindleko zeemodyuli ze-Mini LED backlight ziqhubeka zinciphisa, i-Mini LED ye-TV ye-TV iya kufezekisa ukukhula okuqhumayo, ukudlula ii-OLED ze-OLED kwaye ibe yi-Mainstream kwi-market-to-high-end TV market. Mini LE...
I-Touch Screen Kiosk Solution 1. Umsebenzi we-TV: I-ALL-FHD inkqubo epheleleyo ye-HD isisombululo, inkxaso ye-1920 * 1080, i-32-bit yenyani yombala ogcweleyo we-HD ukubonisa (isebenza kwintsapho, iyunithi, ishishini ...) ku-5, 10, 20, 30 yeemitha kude, okanye ungasebenzisa ikhibhodi engenazingcingo kunye ne...
© Copyright - 2010-2021 : Onke Amalungelo Agciniwe. iveliso ezifakiwe, Imephu yesiza, Dooh Umqondiso weDijithali, Imiqondiso yeDigital Directory, Udonga lweVidiyo yoMqondiso weDijithali, Intengiso yeTouch Screen Kiosk, Itheyibhile yeDiy Touch Screen, Imiqondiso yeDijithali yeSikolo, Zonke iimveliso